Ndị na -emepụta jaket Mens Mens - China Mens Jaketị Ndị na -emepụta jaket
Jaketị ụmụ nwoke
Mens Jacket Plus Size Ogologo oge mgbụsị akwụkwọ oyi guzoro olu olu siri ike na -ere ọmarịcha ahịa
Corduroy Sherpa Lined Truck Jaketị
Nkọwa ngwaahịa 1.Jacket na corduroy owu nwere sherpa lining 2. mmechi abụọ: mkpọchi mkpọchi na snaps 3.2 akpa flaapu nwere ọnyà, obere akpa welt abụọ na 1 akpa welt nwere imechi ọnya Shell: Corduroy Lining: Sherpa Fabric Specification Corduroy na Sherpa Size M, L, XL, 2XL, 3XL, 4XL Logo Fabric Labels nwere Logo Agba 4 agba (Olive, tan, navy, black) mbukota 1pc/polybag, ma ọ bụ dị ka ...
Jacket Puffer Jacket nke ụmụ nwoke
Nkọwa ngwaahịa 1.Rib na -ejikọ akwa ifufe na ọkọlọtọ tommy n'ime ime kọfị 2. akwa olu nwere ajị anụ maka agbakwunyere ọkụ , L, XL, 2XL, 3XL, 4XL maka ntụaka gị Logo Embroidery Logo na agba aka ekpe 3 agba (Black, Army green, Navy) mbukota 1pc/polybag, ma ọ bụ dị ka ihe ị chọrọ MOQ 3000pcs agba ọ bụla Mbupu D ...
Mmiri mkpuchi mmiri nke ndị nwoke Delta Ridge Down Winter Jacket
Nkọwa ngwaahịa 1. Uwe anyị na -enwu ọkụ na -egosi na ọ bụ sistemụ njikwa okpomoku kachasị maka ịrụ ọrụ n'èzí. Ihe dị n'ime ime mejupụtara usoro ntụpọ ọla anyị nke edobere ka ijigide okpomoku, ebe akwa na -eku ume na -ekpofu mmiri. 2.100% DOWN INSULATION: Njupụta dị 650 na mgbagwoju anya na -agbanwe agbanwe n'akụkụ niile dị mma, na -enye elu ụlọ ọzọ, dabara adaba, yana oke ọkụ maka ọtụtụ afọ iji na anụrị. Njirimara 3.HANDY: Jaketị a nwere nro ...
Duck Sanded Duck Sherpa nwere akwa mkpuchi mkpuchi
Nkọwa ngwaahịa. Ọbọgwụ 8.5 ounce ọ bụla akwa akwa 100 % bụ aja na akwa sara maka nkasi obi gị. Agịga atọ agbakwunyere seams maka jaket ọrụ siri ike na nke na -adịgide adịgide 2. Jaketị mkpuchi mkpuchi mkpuchi siri ike bụ ma nke siri ike ma mara mma 3. Eji mkpuchi dị n'akpa ime na n'akpa ekwentị 4. Mkpịsị agịga atọ siri ike maka akwa jaket ọrụ siri ike na nke na -adịgide adịgide. Ọbọgwụ Sherpa ...